DAAWO: Waa kee ninka abaabuley kufsiga Saafi Cumar oo ah Fannaan Youtube halkeese haatan ku sugan yahay? | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Waa kee ninka abaabuley kufsiga Saafi Cumar oo ah Fannaan Youtube...
DAAWO: Waa kee ninka abaabuley kufsiga Saafi Cumar oo ah Fannaan Youtube halkeese haatan ku sugan yahay?
(Hadalsame) 06 Juun 2021 – Saafi Cumar ayaa sheegtay inay weli dareemayso uur ku taallo kasoo gaartey kufsi lagula kacay iyada oo 16-jir ahayd. Waxay ahayd 1986-kii.
Halkan ka akhri sheekada….
Haddaba, Saafi Cumar ayaa sheegtay magaca ninka kufsigeeda agaasimey ee abaabuley, gaariga ku qaaday, ragga kale ee ay 4 nin ku sheegtayna ku casuumey.
Ninkaas ayay Saafi ku sheegtay nin la yiraahdo Cabdullaahi Goofjoog ama Cabdullaahi Goof oo haatan ka mid ah fanaaniinta Youtube ee ku sugan dalkaasi Canada, sida ay ugu dhaaratay waraysi ay siisay Farxiya Cabsiiye.
Previous articleGANTAAL RARTE: Maraykanka oo samaynaya gantaal xamuul & dad qaadaya oo saacad ku gaynaya meel kasta oo dunida ah (Daawo)
Next articleXubbiga & xilka kala dooro! Qiso dhab ah oo ku dhacday Taliye Xigeenka Booliiska Somalia